SSK K-Beauty Online Shopping Mall
ယနေ့ ကြည့်ခဲ့သော ပစ္စည်း
Main အမျိုးသားu Quick Link
Side အမျိုးသားu Quick Link
ဘာသာစကား : EN
ချေးချွတ် / Deep Cleansing
Oil Cleansing / Remover
Lip · Eye Makeup Remover
တိုနာ / Mist
အက်စန့် / ဆီရမ်
လိုးရှင်း / အဆီ / ခရင်မ်
မိတ်ကပ်ဘေ့စ် / မိတ်ကပ်အောက်ခံအရည်
ဖောင်ဒေးရှင်း / ကွန်ဆီလ်လာ
ကူရှင် / ပေါင်ဒါ
ပါးနီ / ဟိုက်လိုက် / Contour
ဆံပင်ပျော့ဆေး / ပေါင်းဆေး / Treatment
ရေမွှေး / Roll On
ခြေ / လက်ထိန်းသိမ်းရန်
BEAUTY TOOLS(အလှအပဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ)
STAR SECRET SEOUL
REVIEW QUEEN ♥
MONTHLY REVIEW QUEEN
NEW BRAND! Owndo Brand Review
နေ့စွဲ : 2021-09-07
အမည် : Editor Seni
လတ်တလော ကျော်ြကားသောအရာများ : 28
SSK Editor Seni ရဲ့ Owndo Line Review
Annyeong~ SSK Lovelies တို့ရေ! SSK က Editor Seni ဖြစ်ပါတယ် အခုလတ်တလောမှာတော့ Seni က Brand အသစ်လေးဖြစ်တဲ့ Owndo ကိုသုံးဖြစ်နေပါတယ်
Korea က Beauty Trend တွေမှာဆိုရင် Cooling Beauty နဲ့ Vegan Beauty တွေက ရေပန်းစားနေပြီးအဲ့ထဲက Owndo လေးက လုံးဝအဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်နေတယ်နော်
Owndo Product တွေက စက်ရုံမှာစိုက်တဲ့အပင်တွေက မဟုတ်ပဲ Jeolla တောင်ပိုင်းဒေသမှာ သဘာဝအတိုင်းပေါက်တဲ့ Chrysanthemum Extract (ဂန္ဓမာပန်း)ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အသားအရည်ကို ချက်ချင်း calm ဖြစ်စေပါတယ် သဘာဝကနေ ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ Owndo က Phyto Balance System အတိုင်း အဆီဓာတ်နဲ့ရေဓာတ်ကို သမမျှတအောင် ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကျန်းမာစိုပြေတဲ့အသားအရည်ကို ရရှိစေတဲ့အပြင် Eco-friendly & Vegan Brand လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ့်အသားအရည်ကလည်း sensitive ဖြစ်ပြီး အခုမှ skincare စသုံးမယ့် ညီမလေးတွေဆို ဒီ Owndo ရဲ့ Basic Care Routine လေးအတိုင်း လိုက်သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်ရှင့်
Step 1 OWNDO Cleansing Bar
32,000ks (original price)
Owndo Cleansing Bar လေးက hypoallergenic လည်းဖြစ်ပြီး သန့်စင်ပေးနိုင်မှု အားကောင်းတဲ့ သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ် အရေပြားပေါ်က အညစ်အကြေးနဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေကို သေချာဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အစိုဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းပေးတာကြောင့် မျက်နှာသစ်ပြီးရင် လုံးဝစိုစိုအိအိလေးဖြစ်နေစေတယ်နော် အဆီဓာတ်နဲ့ရေဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပြီး ကြမ်းတမ်းမှုလည်းမရှိတဲ့အတွက် Deep Cleansing လည်းဖြစ်စေပါတယ်😶‍🌫️
Step2OWNDO Hydro Calming Toner Essence
71,000ks (original price)
မျက်နှာသစ်ပြီးရင် ဒီ Essence Toner လေးကို လိမ်းပေးပါတယ် Owndo Essence Toner လေးက အေးမြလန်းဆန်းတဲ့ Cooling effect လည်း ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အစိုဓာတ်လည်းဖြည့်ပေးပါတယ် ဂန္ဓမာပန်းအဆီအနှစ် 88% ပါဝင်လို့ Calm လည်းဖြစ်စေတယ်နော်
Step3OWNDO Hydro Calming Ampoule Cream
66,000ks (original price)
Owndo ရဲ့ Ampoule Cream လေးကတော့ ဂျယ်လီလိုမျိုး texture လေးဖြစ်ပြီး လိမ်းလိုက်ရင် အေးအေးလေးနဲ့ အစိုဓာတ်ကို အပြည့်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ် Hyaluronic Acid 3မျိုးလည်း ပါဝင်လို့ ရေဓာတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးရုံသာမက olive လိုမျိုး Vegetable Scoalan တွေနဲ့ Panthenol လည်းပါဝင်တာကြောင့် လုံးဝအေးမြလန်းဆန်းနေမှာ အမှန်ပဲနော်
출처 : https://sskbeauty.com/Product/Category/list/cid/326
စုစုပေါင်း0ကော်မန့်ရာခိုင်နှုန်း
Pore Care Skincare Routine Pick!
Special Pick for Men's Care
CAU Lab Product Review
Total Body Relaxation Tips!
Editor Yeni & Seni
Editor Byul Prettyskin Review!
Picking the Right Toner Pad!
Finding the Right Serum Mist!
BMBCO New Brand Tutorial!
Caterpillar MayBe Young & Be Review
Hourglass Body Tutorial!
Hanna Yuri's SSK Base Set Review
🌟 Guest Review! Star Aura Cover Cushion 🌟
Helloskin Jumiso Vitamin C Serum Review By Editor Bae 🍋✨
🌸Editor Yeni Review - Dallong Hair & Body Spray 🌸
ရုံးချိန် AM 9:00 ~ PM 5:00
နေ့လည်စာနားချိန် PM 12:00 ~ PM 13:00
(စနေ၊ တင်္နဂနွေနှင့် အစိုးရပိတ်ရက် နားသည်)
Personal Information Manager : Park Saet Byul
Phone : +82-2-508-0117
Business License : 582-09-00432 [CONFIRM]
If you write down the reason for disqualification, we will actively reflect it in the operation of the shopping mall.
Address : 812, Seolleungro 431, Gangnam-gu, Seoul, Korea Business License : 582-09-00432
COPYRIGHT(C) ALL RIGHTS RESERVED. HOSTING BY MAKEGLOB.